Ukukhulelwa - kuyinselele ngokukhethekile yimuphi owesifazane. Isidumbu sakhe e sokukhulelwa ekuseni ihlangabezana ukucindezeleka enamandla kakhulu. izinqubo eziningi ziqala emzimbeni kamama esizayo. Umzimba nokuthumba owesifazane owayezithwele, is ihlelwe kabusha ukuze wenze ingane ephile saka. Ngesikhathi esifanayo unendima eyinhloko umbungu okhulayo, owasizwa umzimba kamama futhi egijima. Owesifazane ngesikhathi sokukhulelwa ihlangabezana eningi kabi, ubuhlungu ezindaweni ezahlukene zemizimba yabo. Ngesikhathi kusaqalwa kungenzeka ekuseni ukugula, umama okhulelwe cishe ngaso sonke isikhathi ufuna ukulala, ezizwa ukhathele. ukungakhululeki Okuningi ezizwa lapho wakhe ubuhlungu tailbone ngesikhathi sokukhulelwa. Eqinisweni, kunzima kakhulu isimo ezivamile. Kungani ubuhlungu tailbone ngesikhathi sokukhulelwa abesifazane ukubheka esilandelayo.
Okokuqala, ake nje uqaphele ukuthi uma ubuhlungu coccyx babulawa futhi alethe okuningi ukungakhululeki unomphela, kufanele ubone onguchwepheshe. Lokhu kungabangwa owesifazane futhi ingane kuyingozi kakhulu. Ngokuvamile uma ubhekene nesimo esinjena, udokotela ihola owesifazane kunoma uchwepheshe abangakwazi ukubona imbangela eqondile sebuhlungwini obunzima kule ndawo.
Tailbone ubuhlungu ngesikhathi sokukhulelwa ngenxa yezizathu eziningana. ke Okokuqala kungadalwa ngaphambilini wathola ukulimala kwezitho zangasese, emgogodleni. Ngaphambi sokukhulelwa, abesifazane akuzona exinwe ubuhlungu. Nokho, ngenxa yezinguquko ezibangwa isimo esisha, kungenzeka. Ngokwesibonelo, phakathi nenkathi yokukhulelwa ithambo sowesifazane nezinguquko eziphawulekayo. Bona ukwandisa, kuyilapho coccyx kancane Asondele emuva, ngakho-ke kungaphazamisi ingane ngesikhathi sokuzalwa. Uma uneminye ubuhlungu senyanga okugcina enkathi yokukhulelwa, kulesigaba imbangela ubuhlungu kaningi kangakanani ukukhula kwesibeletho. Lokhu kuholela ukungezwani coccyx, ukhalo, zonke emisipheni. Kaningi, ochwepheshe zembula esinye isizathu, yingakho ubuhlungu coccyx ngesikhathi sokukhulelwa. It ezinzwa babancwebe, esemgwaqweni at the ophumayo we iningi coccyx.
Ubuhlungu coccyx ngesikhathi sokukhulelwa kungabangela ukukhubazeka zenzeka sohudo, kulandela ukugasela ezinkulu kule ndawo nokunye. Kunoma ikuphi, kungani obukhulu tailbone ngesikhathi sokukhulelwa, unganquma kuphela nguchwepheshe. Bunake lesi simo. Kungcono kudokotela. Ngakho, ngo-embodiments kakhulu ungagwema kwaba nemiphumela emibi nakakhulu.
What do okhulelweyo, uma engazala ubuhlungu ezinjalo? Kunezindlela eziningana eziphumelelayo ezihambisa kakhulu onguchwepheshe ubuhlungu ahlolisise. Umuntu wesifazane kufanele ufunde indlela uzenza umthwalo omkhulu nge umzimba engezansi, okhalweni. Ukuze wenze lokhu, a umzimba ezimbalwa ezilula ongazenza. letilusito nawufuna ezifana ubuhlungu ejimini ibhola. Ngaphezu kwalokho, lezi izifundo okufanele kwenziwe njalo. Ukuze ukunqanda kancane ubuhlungu obunjeya, singasebenza the coccyx abilisiwe amaqanda noma sikhwama usawoti pre-evuthayo. Nokho, ukwelashwa ukushisa eziningana ziyingozi unina nele-fetus. Ngakho-ke, mayelana ucwaningo anjalo kufanele uthintane kusengaphambili nodokotela wakho. Abesifazane abaningi kusiza ukutshopa ekhethekile, kodwa le ndlela kufanele uqaphele.
Indlela ephumelela kunazo ukugwema ubuhlungu coccyx ngesikhathi sokukhulelwa kanje. Owesifazane okhulelwe kufanele bengaziphathi izinsimbi ezisindayo, ngisho isikhwama esindayo. Musa ukuhlala esihlalweni soft kakhulu. Egqoke umkaki ekhethekile abesifazane isimo kuyinto zokuvimbela ezinhle eziyingozi, futhi unciphise ubuhlungu. umama okhulelwe kufanele uhambe okwengeziwe, hhayi amanga usuku lonke phambi TV. Lena akuyona iholide. Phumula - kuba ngokwemvelo, ihlathi, umoya ohlanzekile, futhi eziningi imizwelo eyakhayo.
Ngesonto yesihlanu yokukhulelwa: Kwenzekani ezingenzeka embungwini nokuthi owesifazane azizwa?
Ukwabiwa ngesikhathi sokukhulelwa. Yini zazisho ukuthini?
Ukukhipha isisu Medical. Zonke
Ngasiphi isisekelo bayahamba emabhilidini zokugeza ngezandla zabo
Easter egg kusukela Origami Modular master-class
Ubudlelwano emkhayeni: iseluleko ngokwengqondo ngoba inhlalakahle endlini
EGibhithe. Izimpawu zokubekisa zase impucuko yasendulo
Baby iphothifoliyo: imininingwane ukulungiselela
Indlela ukususa imingcele imidlalo "Alawar": isitatimende